Madaxdu waaba na tuseen iyaga oo Gacmaha is heeysto oo Toqfolaha leeyrinayo!!! | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Madaxdu waaba na tuseen iyaga oo Gacmaha is heeysto oo Toqfolaha leeyrinayo!!!
Madaxdu waaba na tuseen iyaga oo Gacmaha is heeysto oo Toqfolaha leeyrinayo ,ee mana tuseen iyaga oo Quluubtu is heysto.
Dhamaadkii Dagaaladii Afar Billoodka ee Xamar, ayaa waxa isku yimid Odayaashii dhaqanka ee Labadda dhinac ee dagaalay, markii doodii la isku fahmi waayay, lana gaaray waqtigii Saladda Maqrib, Safkii Salaadana la galay ayaa Imaamkii yiri: Istawuu, istawuu, Safafka sina, Lugahiina sina.
Macallin Haaruun AUN oo ka mid ahaa odayaashii Dhaqanka ayaa ku yiri Jamaacadii: (walba Lugahiina sina , Annigaa og oo Quluubtiinu ma sinee).